Jaarmaya Tokummaa Baqattoota Oromoo A B O Yaman -
Guyyaa gootota Oromoo kabajachuuf yeroo walitti dhufnu gaddonee addaan galuu osoo hin taane guyyaa akkeekaa fi kaayoo gootonni keenya irratti wareegaman san walhubachiifnee faajjii gootowwan keenyaa irratti aarsaa ta’an deebifnee ol qabuun gumaa gootowwan keenyaa baasuuf qophii ta’uu ibsina.
Qabsoo ABOn bilisummaa , walabummaa ,walqixxummaa fi dimokraasummaa haqaa Oromiyaa irratti argamsiisuuf godhu keessatti qabsoo Oromoo gara fuulduratti tarkaanfachiisuuf injifannoo irraa maayii saba oromoo gonfachiisuuf wareegama qabsoon barbaaddu hundaa kafaluuf qophii ta’uu keenya ibsina.
Biyya keenyaafi mirga bilisummaa walabummaa ofii keenyaa qabsoo keenyaan kabachiifanna malee akka yoomiyyuu diinni keenya nuuf hin kabachiifne ta’uu ibsina.
Qabsoo oromoon oromoo fi oromiyaaf godhu keessatti okkarsi diinaa qabsoo keenya laaffisuu osoo hin taane daranuu akkagara fuulduraattii tarkaan fachiisu ta’uu ibsina.
Tokummaa qabsaa’ota oromoo mooraa qabsoo bilisummaa oromoo fi gurmuun qabsaa’ota oromoo diinni isaa tokkichi TPLF ta’uu hubachuun akka qabsoo oromoo gara fuula tokkootti deebi’u abdii guddaa qabaachuu keenya ibsina . kana yeroo jennu kan carraa baqattummaa ilmaan oromoo muudachiisuun biyyoota garaa garaa keessattigochaan gara jabinaa gubachuu fi qalamuu akkasumas rasaasaa fi galaanaan nyaattamuu kan muudachiise sirna abbaa irree mootummaa wayyaanee ta’uu hubachiifna.
Tokkummaan keenya dhukkuba vaayrasii diina keenyaa ta’uun hubachuun bakka jirruu tokkummaa keenya akka jabeeffannu saba keenya hubachiisuu barbaanna.
Previous Kun munaafiqa
Next Someone Finally Explained How ISIS Was Created, and it Will Make You Question Everything ..